Kulanka masuuliyiinta waaxyaha KDQ ee doorashada 13/11/2017 | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 September 10 News Kulanka masuuliyiinta waaxyaha KDQ ee doorashada 13/11/2017
Kulanka masuuliyiinta waaxyaha KDQ ee doorashada 13/11/2017
Masuuliyiinta waaxyaha (departments) ee KDQ oo kulan muhiim ah ku yeeshay xarunta KDQ, kulankan oo ujeedadiisu aheyd u diyaar garawga hawlaha doorashda 13/11/2017.
Ugu horeyn waxa halkaas warbixin ka soo jeedshay Agaasiimaha Guud ee KDQ mudane Cabdiraxman Saciid, ka dib waxa si dhameystiran uga war bixiyay sida ay hawlaha KDQ u socon doonaan ilaa maalinta lugu dhawaaqi doono natiijada ka soo baxda codeynta dhici doonta 13/11/2017ka madaxa hawl galinta KDQ mudane Saciid Cisman.
Gabagabadii waxa kalmado kooban kula wadaagay xubnahan masuuliyiinta KDQ Guddida komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ugu horeyn uga mahad celiyay shaqaalaha KDQ sida xil kasnimada iyo daacadnimadu ku jirtay ee ay u soo khatimeen diiwaan galintii iyo kaadh qaybintii ka qabsoontay lixda doorasho gobol. Sidoo kale waxa ay u soo bandhigeen shaqaalaha waqtiga doorashadu dhici doonto oo mudo koobani ka hadhay in la dardargaliyo hawlaha horyaala waaxyaha wakhtigana laga faa’iideeyo.
Ugu dambeyn waxa la isla qaatay in la gudagalay hawlihii doorashada laguna kala qaatay goobtaas waax kasta hawshii u taal iyo jadwalkii shaqada.